Haddii aad joogto harada isla markaana aragto calaamada “WARNING” (DIGNIIN) ,waxaa harada ku jira algae sun ah.
Haradani ‘lake’ waa mid aan badbaado u lahayn dadka iyo xayawaanka la korsado.
Ha ku dabaalan ama ha sameyn ciyaarta ski ee biyaha.
Ha cabin biyaha harada.
Ka fogee carruurta, xayawaanka la korsado, iyo xoolaha.
Si fiican u nadiifi kalluunka/malaayga isla markaana tuur caloosha.
Iska ilaali meelaha wasaqda leh marka doonta lagu socdo.
Wac dhakhtarkaaga ama dhakhtarka xoolaha haddii adiga ama xayawaankaaga ay yeeshaan jirro lama filaan ah ama aan la fahmin ama calaamadaha sumowga.
Haddii aad joogto harada isla markaana aragto calaamada “DANGER” (KHATAR), waxaa harada ku jirta qiyaas sun ah oo aad u sareysa.
Haradani ‘lake’ wey xiran tahay. Iska ilaalo in aad gasho harada. Ha ku dabaalan, ha ku dhex socon, ha ka kaluumaysan, ama dooni ha ku socon.
Waa maxay algae sunta ah?
Algae waa waxyaabo yar yar oo ku nool harooyinka kuwaas oo isticmaala iftiinka qoraxda si ay u koraan, sida dhirtu ay sameyso oo kale. Algae waa cunto muhiim u ah kalluunka/malaayga iyo xayawaanada kale ee ku jira harooyinka. Laakiin qaar ka mid ah noocyada algae ayaa soo saara sun waxyeello u leh dadka iyo xayawaanka la korsado.
Algae sunta ah waxay u ekaan kartaa rinji ku daatay biyaha dhexdiisa, ama sida dhibco yar yar ama kooxo dhir ah oo ku jira biyaha dhexdooda.
Waxay inta badan yihiin cagaar khafiif ah ama buluug-cagaar , laakiin sidoo kale waxay noqon karaan cagaar, jaalle, ama buni. Sawirro badan ayaa laga helayaa https://www.nwtoxicalgae.org/Gallery.aspx. Haddii aad aragto algae u eg kani, badbaado ku sugnow isla markaana iska ilaali in aad gasho harada!
Haddii algae u egyahay sida darin/roog adag oo kale ‘mats’ ama xargaha waxaad ku qaadi kartaa gacmahaaga, waa nooc kale oo algae ah. Ma soo saaro sun.
Waa kuwee harooyinka leh algae sun ah?
Ogow kuwa ay yihiin harooyinka ku yaala Gobolka Washington ee hada leh algea sun ah www.nwtoxicalgae.org. Ka fiiri dhinaca midig ee website-ka liiska harooyinka. Harooyinka liiskan ku jira ee dhawaan laga qaaday muunado dhanka biyaha ee yeeshay qiyaas sun ah oo aan badbaado lahayn.
Haddii qoraalka guduudka ahi leeyahay “No lake is above guidelines” (Ma jirto haro ka sarreysa tilmaamaha la raacayo), ma jiraan harooyin dhawaan laga qaaday muunado oo yeeshay qiyaas sun ah oo aan badbaado lahayn.